लोकदर्शन रेग्मीमाथि ओली सरकारको ‘कु’, लम्साल कावा मुख्यसचिव | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:४३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गरेका लोकदर्शन रेग्मीमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘कु’ गरेको छ । सरकारले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत काम गर्न नसकेपछि रेग्मी माथि ‘कु’ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणमा जानु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेग्मी माथिको ‘कु’ गर्ने निर्णय गरेको हो । रेग्मीलाई दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतको रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भए पनि आफ्नै बारेमा भएको निर्णय भन्दै उनले प्रमाणित समेत नगरेको बुझिएको छ । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिसमा पारेर मुख्यसचिव पद नै चट पारेपछि उनी विदा लिएर गृहजिल्ला स्याङ्जा पुगेका छन ।
मुख्य सचिवबाट कु गरिएका रेग्मी माथि सरकारका सबै गोप्य सूचना कांग्रेसको नेतृत्वमा पुर्याएको देखि कर्मचारी प्रशासनमा भद्रगोलता र अराजकता निम्त्याएको आरोप लागेको छ । यद्यपी आफूले भनेको जस्तो देशमा राजदूत नपाएको भन्दै उनले उक्त देश अस्वीकार गरेका छन । राजदूत पद अस्वीकार गरे पनि रेग्मी निजामति सेवाबाट स्वत बाहिरिने अवस्था नभएकाले उनको उपयुक्त व्यवस्थापानका निम्ति प्रधानमन्त्री यूरोपबाट फर्केछि टुंगो लाग्ने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमण सेकर सकेर स्वदेश फर्किए लगत्तै मुख्यसचिवमा हालका गृहसचिव प्रेम कुमार राई नियुक्त हुनेछन । उनी काममा अब्बलता भएका प्रधानमन्त्री निकटका सचिव हुन । राईले गृह सचिवको रूपमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा हुने गरेको छ । रेग्मी मुख्यसचिव गुमाएर विदामा बसेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णु लम्सालले कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन ।
मूख्यमन्त्रीका लागि एमालेमा रडाको, सासंद खरिदको सम्भावना बढ्यो !
काठमाण्डौ । सात प्रदेशमध्ये चारवटामा सरकार बनाउन लागेको नेकपा एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा शंकर…
कांग्रेसले दस्तावेजबाट आर्थिक नीति फेर्दै , उच्च उत्पादकत्व र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको प्रस्ताव ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आर्थिक नीति परिवर्तन गर्ने भएको छ । विगतमा अपनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिंदो…
आकर्षक पदमा नियुक्ति लिन दौडधुप
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले गरेका झण्डै चार दर्जन राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा परेसँगै रिक्त पदमा पुग्न दौडधूप सुरु भएको छ…
बजेट भाषणः ७० वर्ष कटेका बृद्धको विमा गरिदिने देखि चुुरोटमा जोखिम कर लिनेसम्मको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १३ अर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त…
दुबीकै कारण तनावमा त हुनुहुन्न ?
–२५ ग्राम किकरको सुख्खा पात
–२५ ग्राम पानको ठुलो सुपारी
–२५ ग्राम काबली हरडको बोक्रा
किकरको पातलाई केहि घण्टा छायांमा…
मुनाफा फिर्ता लैजाने कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छौ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरे मुनाफा फिर्ता लैजाने कुराको सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने बताएका…